Fampiharana Android: hevitra, famoahana vaovao, maimaim-poana ary maro hafa! | Androidsis
Smartphone Android tsy misy dikany izany raha tsy eo ny fampiharana azy. Ny fampiharana dia ireo izay mamela anao hampiakatra ny fampiasa ao amin'ny smartphone Android ho lasa tsy manam-petra ary hanao an'ity terminal ity izay tianao: fitaovana miasa, ivon-lalao, fandaharam-potoana manokana na inona na inona.
Ao amin'ny Google Play - fivarotana app Android - ananantsika fampiharana ho an'ny tsiro rehetra ary miaraka amin'ireo fiasa azo atao rehetra. Fandaharam-potoana, lalao, mandeha ho azy amin'ny birao, tambajotra sosialy, fampiharana fialamboly, ho an'ny fanatanjahan-tena, sns. Betsaka ny safidy fa ny tena zava-dehibe dia ny hahafahana mifantoka sy mahita izay ilainao, ary koa ny tsy mametraka fametrahana fampiharana tsy ilaina mihitsy…. Ary izany no ilantsika! Hanampy anao amin'ny ity tontolon'ny fampiharana Android ity.
Fanangonana apps ho an'ny Android
Fampiharana tsara indrindra amin'ny taona 2018
Sintomy ny APK farany an'ny fampiharana tsara indrindra
Mitady fampiharana ara-pahasalamana? Jereo amin'ity fizarana ity ireo fampiharana tsara indrindra hanatsarana ny fahasalamanao na amin'ny torohevitra momba ny fomba hijanonana amin'ny endrika.
Fampiharana fanatanjahan-tena tsara indrindra
Fampiharana hanaovana abs
Fampiharana hanaovana yoga
Fampiharana hialana amin'ny sigara
Fampandrahoana sakafo sy fandrahoana sakafo
Ny fampiharana tsara indrindra amin'ny fitsangantsanganana
Fampiharana tsara indrindra ho an'ny fanatanjahan-tena
Amin'ity fizarana ity dia ho afaka hahafantatra ny zava-drehetra momba ireo tambajotra sosialy malaza eran-tany ianao. Ahoana ny fampidinana azy ireo, tetika hampiasana azy ireo tsara kokoa amin'ny Android sy ny vaovao rehetra momba azy ireo.
Fampiharana hanararaotana ny Twitter
Fampiharana hihaonana amin'ny olona
Fampiharana tsara indrindra hanaovana antso an-tsary
Vaovao sy tetika farany amin'ny WhatsApp
Amin'ny fitaovana dia ho hitanao ny fampiharana Android tsara indrindra izay hanampy anao hanamora ny fiainanao. Sakano ny antontan-taratasy, raiso na manatsara ny vokatrao amin'ny alàlan'ny fampiharana tsara indrindra izay ho hitanao ato amin'ity fizarana ity.
Fampiharana asa tsara indrindra
Fampahatsiahivana tsara indrindra fampiharana
Fampiharana hanatsarana ny vokatra
Fampiharana fanamarihana tsara indrindra
Fampiharana hifehezana ny fandaniana
Fampiharana tsara indrindra hamerenana ireo rakitra voafafa
Fangatahana hiarovana ny fiainanao manokana
Fampiharana hanakanana antso
Fangatahana handraketana ny efijery findainao
Fampiharana hijerena antontan-taratasy
Fampiharana tsara indrindra hanalana horonantsary
Fampiharana hamantarana radara
Raha liana amin'ny fampiharana podcast ianao na afaka ny ho lasa DJ mampiasa ny finday finday Android-nao, dia ho azonao atao ny mahita azy rehetra eto ambany ka mampiasa ny findainao amin'ny fomba tsara indrindra.
Fampiharana tsara indrindra ho an'ny mpitendry mozika
Fangatahana mihaino radio
Fampiharana ho DJ amin'ny Android
Fampihainoana mihaino podcast amin'ny Android
Misimisy kokoa momba ny fampiharana mozika amin'ny Android
Raha fangatahana hanovana ny sarinao amin'ny findainao Android no tadiavinao dia ireto misy fampiharana tsara indrindra hamerenana ny sarinao:
Fampiharana sary tsara indrindra ho an'ny Android
Fampiharana handaminana sary
Fampiharana amin'ny fakana sary lehibe
Fampiharana hanaovana meme
Fampiharana famolavolana sary tsara indrindra
Misimisy kokoa momba ny fampiharana sary ho an'ny Android
Raha mitady rindranasa ahafahanao mianatra avy amin'ny telefaona Android ianao dia mamela anao hisafidy fampiharana fampiharana tsara indrindra ao amin'ny Google Play izahay.
Ny fampiharana tsara indrindra hianarana teny frantsay
Fampiharana hianarana hihira
Fampiharana hianarana Alemanina
Fampiharana hianarana piano
Misimisy kokoa momba ny rindranasa hanovana PDF
Raha te-haharaka ny zava-drehetra mifandraika amin'ny ekosistra Google ianao, anisan'izany ny fampiharana azy, dia aza hadino ity fizarana ity. Hita ao aminy ny vaovao sy ny tetika rehetra.
Fampiharana tsara indrindra ho an'ny Android Wear and Wear OS
Fampiharana tsara indrindra ho an'ny famantaranandro Android
Fampiharana amin'ny fahitalavitra Android
Fampiharana Android 10 tsy maintsy ananana
Ao amin'ny Android dia mahita safidy malalaka misy fampiharana. Na dia misy aza ny rindranasa misongadina ambonin'ireo ambiny, izay azontsika heverina ho ny tsara indrindra. Ireo no fampiharana 10 tsara indrindra ho an'ny Android ankehitriny.
Ny fampiharana fitetezana dia nivoatra be. Tsy hampiasa azy io fotsiny ho an'ny lalana na hivezivezena isika rehefa mitondra fiara amin'ny toerana hafa. Azontsika atao ihany koa ny mahita ny satan'ny fifamoivoizana, mahita toerana mahaliana na manana fidirana amin'ny tolotra eo an-toerana. Fampiharana tena feno.
Ny fampiharana mozika soedoà dia iray amin'ireo malaza indrindra amin'ny Android. Manome antsika fidirana amin'ny katalaogna mozika goavambe amin'ny telefaona ity, izay hahafahantsika mihaino ny mozika ankafizinay na aiza na aiza misy anay.
Ny fampiharana dia tsy azo lavina fa iray amin'ireo malaza indrindra amin'ny Android. Misaotra azy isika afaka mandefa hafatra amin'ireo namantsika sy fianakaviantsika ary afaka mifanerasera amin'ny fotoana rehetra. Manana chat group koa izahay, ankoatry ny mety hanaovana antso na antso video.
Ity fampiharana sary ity dia iray amin'ireo tena ilaina amin'ny Android ankehitriny. Tsy mamela antsika hitahiry soa aman-tsara ao anaty rahona fotsiny ny sarintsika rehetra, fa mamela antsika handamina azy ireo mora amin'ny sokajy rehetra ihany koa. Izy io koa dia mampifangaro azy ireo amin'ny fitaovana hafa.
Ny tambajotra sosialy dia iray amin'ireo fampiharana malaza indrindra amin'ny Android ankehitriny. Afaka mampakatra sary sy horonan-tsary ao isika, ho fanampin'ny tantaran'izy ireo (izay manjavona ao anatin'ny 24 ora). Ny fahafahan'ny fanarahana kaonty isan-karazany amin'ny fampiharana, ankoatra ny fahafahany mividy ao anatiny, ataovy iray amin'ny feno indrindra.
Tambajotra sosialy iray hafa izay fantatra fa mitazona eo amin'ny tsena ary fampiharana tena ilaina amin'ny Android. Noho io dia afaka mifandray amin'ny namana isika, ankoatry ny fanavaozana ny vaovao amin'izao tontolo izao na ny fanarahana ireo mpanakanto tiantsika ao.
Ny fampiharana dia fototra iray amin'ny telefaona Android rehetra. Afaka miditra amin'ny kaonty mailaka antsika amin'ny fomba tsotra isika. Ho fanampin'izany, manana fiasa mahaliana be izahay, toy ny fandaharana mailaka. Araka izany, ho azo atao foana na aiza na aiza misy antsika.
Fomba tsara hanovana ny fisehoan'ny findainao Android amin'ny fomba tsotra, miaraka amina fiasa sy safidy vaovao, toy ny maody maizimaizina, ahafahan'ny mpampiasa mampiasa manokana ny rafitra fandidiana manokana amin'ny fotoana rehetra.
Ilaina amin'ny Android ny browser, saingy azo atao ny Google Chrome, izay apetraka an-tanindrazana amin'ny telefaona, ny feno indrindra. Manome antsika asa maro izy, tsotra ny fampiasana azy ary mamela antsika koa hampifanaraka azy amin'ny kinova desktop amin'ny alàlan'ny kaonty Google.
Fampiharana fandefasan-kafatra hafa, izay nahazo toerana tamin'ny Android. Misongadina amin'ny interface tsotra izy io, fa amin'ny fanomezana antsika asa maro samihafa, indrindra eo amin'ny sehatry ny fiainana manokana, miaraka amin'ny resaka miafina na ny mety hamotehana azy ireo aorian'ny fotoana fohy.
Fampiharana Android bebe kokoa
Amin'ity fizarana ity dia azonao atao ny miditra amin'ny rindranasa maro samihafa izay dinihintsika isan'andro. Jereo ny hevitra tsara indrindra ary koa ny fampianarana sy tetika hahazoana tombony betsaka amin'ny fampiharana Android.
Ny fampiharana 8 tsara indrindra hahitana holatra misy sary
Ianao ve mpitia fihazana holatra izay manana olana amin'ny famaritana ny sakafo ara-tsakafo? Betsaka ny fampiharana fampahafantarana ...
ny Ignacio Sala hace Andro 3 .
Rehefa nivoatra ny teknolojia finday avo lenta, any amin'ireo magazay fampiharana ho an'ny finday dia manana ...
Raha mamaky momba ny teknolojia tsy tapaka ianao dia azo inoana fa efa nandre ilay teny hoe deepfake ianao, teny iray ampiasaina ...
ny Aaron Rivas hace Andro 6 .
Ny chat video na ny fiantsoana horonantsary dia iray amin'ireo endrika serasera marobe ankehitriny. Mamonjy antsika betsaka ...
ny DaniPlay hace Andro 6 .
Fintonic dia fitaovana lehibe nandritra ny taona maro rehefa nitantana ny fitantanam-bola samirery samy tao an-trano ...
Ny safidy tsara indrindra mankany Amazon
ny DaniPlay hace 1 herinandro .
Noraisin'i Amazon ny ampahany betsaka tamin'ny tsena raha ny amin'ny fiantsenana amin'ny Internet no resahina. Ny olom-pantatra ...
Hatramin'ny nividianan'i Mark Zuckerberg Instagram, ity tambajotram-pifandraisana ity dia nitombo tamin'ny alàlan'ny fetra Facebook ...
Ny horonan-tsary no filaharan'ny andro. TikTok, Instagram ary ankehitriny YouTube Shorts, no lasa ...
ny Aaron Rivas hace 1 herinandro .
ny Aaron Rivas hace Herinandro 2 .
Ny stickmen, fantatra ihany koa amin'ny hoe stick stick, dia iray amin'ireo olona mahatsikaiky indrindra amin'ny lalao Android. Ho an'ny ...
Ny fampiasana finday avo lenta dia nitombo be raha oharina amin'ny solosaina nentim-paharazana tato anatin'ny taona vitsivitsy, na dia ...
Fomba vaovao mahagaga hanidiana Android. Omeo kapoka !!
Ahoana ny fomba hijerena ny fiarovana ny Wifi anao ary hahafantatra hoe iza amin'ireo fitaovana mifandray
Ireo no rindranasa 19 izay nitrandraka Bitcoin tamin'ny Android nefa tsy nahazo alalana taminay